Ahoana No Tsy Anatrehana Fanonganam-Panjakana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Aogositra 2015 18:11 GMT
Ny Trano Mena (Havia) sy ny Foibe Tranainin'ny Polisy (Havanana) ao amin'ny Seranan-tsambon'i Espaina, Trinidad. Nobodoin'ireo mpihoko avy amin'ny Jamaat-al-Muslimeen ny 27 Jolay 1990. Simba noho ny fiara voasesika baomba ihany koa ny Foibe Tranainin'ny Polisy. Sary avy tamin'i David Stanley (CC BY 2.0).
Navoaka tamin'ny bilaogin'ny Free Radio ao Karaiba ny fitantaràna voalohany tamin'ity lahatsoratra ity, ny 27 Jolay 2010, fitsingerenan'ny faha 20 taona saika nisian'ny fanonganam-panjakana nataon'ny mpikambana tamin'ny Jamaat-al-Muslimeen tao Trinite sy Tobago.
Nanomboka tamin'ny fialàna ny firenena andro vitsy nialoha ilay tranga (tsy hoe fantatrao fa hitranga io akory). Dimy andro eo dia tsara — ataovy hoe manodidina ny 22 Jolay 1990. Ataovy azo antoka tsara hoe lavitra ny vondrom-piarahamonina misy ireo Indiana tandrefana ny toerana alehanao. Safidy afaka raisina tsara ny Kalifornia Avaratra.
Ny marainan'ilay zava-nitranga, mipetraha eo amin'ny tranokely fitoeran'ny mpianatra namanareo ao amin'ny Sekoly Fianarana ho Mpitsabo ao Stanford Trinidadiana any Menlo Park, manorata ny zavatra holazaina amin'ny televiziôna amin'ilay solosaina Mac Plus an'ny sipan'ilay namanao, avoahy an-taratasy ary ento ho eny amin'ny toeram-pivarotana fanaovana dika an-taratasy, izay akaiky eo. Ao amin'ilay toeram-pivarotana, alefaso “fax” ilay soratra ho any amin'ireo namanao any Trinite, izay, ny harivan'io andro io, hampiasa azy mba hanaovana ampahany iray aminà fandaharana amin'ny televiziôna izay iasanareo miaraka. Mahatonga anao ho tafiditra ao anatin'ny fitantaràna mahery fo kokoa ataon'ny namanao mikasika ilay zavatra nitranga ny fandefasanao ilay “fax”, eny, marina fa tsy fantatrao izany amin'io fotoana io.
Mandraisa ny fiarandalamby ho any San Francisco, mivenjivenje eraky ny tanàna sahala amin'ny mpizahatany, avy eo ny hariva mifanaova fotoana amin'ny namanao mba hikarakaràna ny fiverenana ho any Menlo Park. Raha mbola ilay mipetraka ao anaty fiara iny, ao anatin'ny fitohanana amin'ny ora maha betsaka ny fifamoivoizana eny amin'ny lalambe US-101, lalaovy ny bokotra fanovaovàna ny radio, indro ny tatitry ny Radio Nasiônaly momba ny andrana fanonganam-panjakana tao amin'ny firenenao.
Mitanakà vava amin'ny fifanandrifian'ny fiverenanao, amin'izay fotoana izay mihitsy, amin'ny tatitra vaovao mahakasika firenena iray izay tsy mba faheno firy amin'ireo vaovao mandeha any Etazonia, na dia amin'ny radiom-panjakana aza, kanefa mbola miandry ilay feon-kira amin'ny faran'ilay tatitra milaza fa vao avy nandre ampahanà hatsikana ianao. Rehefa injay ka eo amin'ny toeran'ny feon-kira farany, maheno tatitra hafa indray ianao mombanà zavatra ratsy miseho any amin'ny faritra sasany amin'izao tontolo izao, ary tsy mahahetsika ao anatin'ny segondra vitsy. Avy eo andramo ny mamerina miantso, mba ahitàna hoe dimy andro talohan'io ve, nisy famantarana na toromarika hoe hisy zavatra hitranga tahàka izany. Tapaho ny hevitra hoe tsy nisy mihitsy.
Satria taona vitsy aty aoriana vao samy manana finday daholo ianao sy ny namanao — na ny ankamaroan'ireo olon-tsotra maneran-tany — mipetraha tsindrin-daona ao anatin'ny fifamoivoizana mandra-pahatonganao any Menlo Park. Vao tonga any, mihazakazaha mankeny amin'ny milina fametrahana hafatra izay mampientanentana amin'ireo feo napetraka ho hafatra. Mihomeheza amin'ny hafatry ny rahavavin'ny namanao izay mipetraka any Washington DC: “Nisy Fanonganam-panjakana taty! Antsoy aho!” Manontania tena momba izay fomba nahazoan'ireo Trinidadiana rehetra any amin'ny morontsiraka andrefana ny laharan-taribin'ny namanao. Mamerena miantso. Valio ireo antso vaovao miditra. Itaraino ny amin'ny hoe tsy misy manana vaovao matotra ny rehetra.
Na dia sarotra azo aza matetika ny laharan-tariby mankany Trinite, andramo ihany ny maka vaovao any amin'ireo fianakaviana, fa hamarino tsara aloha hoe voaomanao ny lisitr'ireo fanontaniana, satria tsy mora ny saran'ny antso lavitra ary tsy mbola noforonina na ny Skype na ny Magicjack tamin'izany. Itaraino ny tsy fisian'ny vondrom-piarahamonina Indiana Tandrefana marina any Kalifornia Avaratra, sahala amin'ny misy any New York na Washington D.C. na Florida Atsimo na Atlanta, mba resaho ny fameran'izy io ny fahafahanao miditra hahare ireo siosio voafantina sy amin'ireo olona izay mahafantatra olona nahavita nahazo olona tany Trinite izay mahalala olona mahafantatra ny zava-mitranga marina. iaino ny fahatsapàna ho tena irery sy lavitra ny hafa tanteraka.
Ajanony eo amin'ny NPR ny radio. Hamarino tsara hoe mihaino tatitry ny NPR ianao izay misy mpanao gazety fantatrao anaovana tafatafa any amin'ny Seranan-tsambon'i Espaina, momba ireo zava-doza niseho tamin'ny firenenao, eo am-pipetrahana eo amin'ny tampon'ny fiara any Stinson Beach, ao anatin'ny rivo-dranomasin'i Marin Headlands, mitazana an'i Pasifika mahatalanjona. Mariho io ho tahàka ny zavatra mifanandrify mahagaga indrindra amin'ny fiainanao mandrak'ankehitriny.
Ilaozy ny ao Kalifornia ho any New York. Andraso ao izay mety ho toy ny hoe herinandro maro — na mety ho izany mihitsy, satria tsy mbola nanao famandrihana ny dianao rehetra ianao tamin'ny fampiasàna ireo tolotra mbola ho nofinofisinao, toy ny Dopplr sy ny TripIt. Jereo hatrany hatrany, ilay hany sary tokana mampiahiahy tamin'ny CNN an'ny tanànan'ny seranan-tsambon'i Espaina, miaraka amin'ilay setroka miakatra avy eo afovoan'ny tanàna. Henoy ireo onjam-peon'ny fampielezampeo amin'ny radio Indiana Andrefana; miresaha amin'ireo olona amin'ny antso an-telefaona — saingy ataovy tsapa ihany hoe tsy mahalala na inona na inona amin'ny zava-mitranga any amin'ny firenenao ianao, afa-tsy ny hoe nitolo-batana ireo mpanani-bohitra ary misy izao ny fetr'ora farany azo ivoahana ny trano. Manoràta taratasy maro (sora-tànana, amin'ny taratasy, satria dimy taona aty aoriana vao mahazo kaonty emailaka) amin'ireo namana amin'ny toerana maro samihafa, hilazàna amin'izy ireo fa mety ho tafahitsoka ao Etazonia ianao.
Mitsiririta mafy ireo roa mpiara-miasa aminao izay teo am-panodinana ny “script”-nao fony tonga teo amin-dry zareo ilay vaovaonà fihokoana, ary tsy nisy asa hafa afaka nataony afa-tsy ilay zavatra nitranga, nitatitra hoe nivoaka tany ivelany niaraka tamin'ny fitaovana fanodinana horonantsary izy ireo mba hakàna ireo niseho nifandraika tamin'ilay fanonganam-panjakana.
Aza mitsahatra ny manindry tsy ankijanona ny orinasam-pitanterana mba hanome toerana anao amin'ny sidina miverina. Makà amin'ny sidina izay mifandray amin'i Miami, na midika aza izany hoe tsy maintsy mandany alina iray mahatsiravina ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena ao Miami.
Miverena any Trinite. Tsy mahatadidy intsony, 25 taona aty aoriana, hoe iza no naka anao teny amin'ny seranam-piaramanidina, inona no itanao avy tao anatin'ny fiara teny amin'ny làlana nody tany an-trano, inona no tsapanao rehefa nanitsaka ny tokonam-baravaranao izay tsy noeritreretinao ho hitanao intsony ianao nony farany.
Manontania tena hoe lava tokoa ve izany 25 taona izany, na raha misy antony hafa, ho apetrakao anjorony ireo tsiaro ireo.